Fampifaliana ny ory
"Sambatra ny ory, fa izy no hampifaliana." — Mat. 5:4.
Ny fahoriana izay hisarihana ny saina eto dia ny alahelo marina noho ny fahotana (...) Rehefa voasarika hibanjina an'i Jesôsy nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana ny olona iray, dia hitany miavaka ny maha-mpanota ny taranak'olombelona. Hitany fa ny fahotana no nanafay sy namantsika ny Tompon'ny voninahitra. Hitany fa notiavina tamin'ny fomba feno fahalemem-panahy tsy hay hazavaina izy, na dia teo aza ny fiainany izay naneho tsy fahaiza-mankasitraka sy fikomiana. [...] Nofantsihany teo amin'ny hazo fijaliana indray ilay Zanak'Andriamanitra, ary nolefoniny indray ilay fony efa naratra sy voatorotoro. Hantsana feno fahotana, izay midadasika sy maizina ary lalina no manasaraka azy amin'Andriamanitra, ka ory izy satria ketraka ny fony. "Hampifalina" ny olona tratry ny fahoriana tahaka izany. Asehon'Andriamanitra amintsika ny fahamelohantsika mba hahafahantsika mialoka eo amin'i Kristy, sy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny vahohon'ny fahotana amin'ny alalany, ary hiravoravo ao anatin'ny fahafahana izay an'ireo zanak'Andriamanitra. Ao anatin'ny fahatsapana ny nenina fatratra noho ny ota no hahafahantsika mankeo an-tongotry ny hazo fijaliana, sy manala ireo enta-mavesatra entintsika (...)
Mirakitra hafatra mampahery ho an'ireo izay ketraka sy torovan'alahelo ny tenin'ny Mpamonjy. Tsy maniry avy amin'ny tany ireo alahelontsika ireo. "Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona". Avelany hitranga ny fisedrana sy ny zava-mahory, mba "hahasoa, mba handraisantsika ny fahamasinany." Tonga fitahiana ireo fisedrana izay toa mangidy sy mafy raha toa ka raisina amin'ny finoana. Ny rivo-mahery izay mandrava ny fifalian'ny tany no ho fitaovana hampitodika ny masontsika eny amin'ny lanitra [...] — TFMB, 22-25.